ခရီးသွားဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါ ဘာလို့ပင်လယ်ကမ်းခြေကို ဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်တာလဲ? – Trend.com.mm
ခရီးသွားဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါ ဘာလို့ပင်လယ်ကမ်းခြေကို ဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်တာလဲ?
Posted on March 13, 2019 by Noel
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ခရီးသွားမယ်၊မိသားစုတွေနဲ့ခရီးသွားမယ်၊အပန်းဖြေခရီးသွားမယ်ဆိုရင် တစ်ခြားခရီးစဉ်တွေထက် ဘာလို့ပင်လယ်ကမ်းခြေကို
ဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်တာလဲ?အဓိကက ခရီးထွက်တယ်ဆိုတာ စိတ်အပန်းပြေချင်လို့ပဲမဟုတ်လား။ဒါကြောင့် ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုတစ်ခါမှ
မသွားဖူးဘူး၊မရောက်ဖူးဘူးဆိုရင် ပင်လယ်ကိုပဲခရီးထွက်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်…
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ပင်လယ်လှိုင်းသံနဲ့ ပင်လယ်ရဲ့ ရနံ့ဟာ Cotisol level လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဟော်မုန်းကို လျှော့ချပေးနိုင်တယ်
လို့သိရပါတယ်။ပင်လယ်ကြီးကိုကြည့်မယ်။ပင်လယ်လေကိုရှုရှိုက်ပြီး ပင်လယ်လှိုင်းသံလေးတွေကို နားထောင်မယ်ဆိုရင် သင့်မှာရှိနေတဲ့
ခရီးထွက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ အေးအေးဆေးဆေးအနားယူလိုက်တာက သင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေ၊စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို
ယူပစ်လိုက်သလို ပျောက်ကင်းသွားစေမှာပါ။ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါ ပင်လယ်လေသန့်သန့်လေးရှုရင်း ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ
ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ အနားယူအပန်းဖြေတာဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေပြေလျော့သွားတဲ့အပြင် ကိုယ့်ရဲ့ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှုတွေကလည်း ပိုကောင်းလာပြီး စိတ်ကူးဥာဏ်သစ်တွေ၊တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေဟာ ပိုပြီးထိုးထွက်လာစေပါတယ်။အတွေးအမြင်သစ်တွေလည်းရလာစေလို့ သင့်အလုပ်ကိုလည်းပိုပြီးအောင်မြင်တိုးတက်စေမှာအမှန်ပါ။
တစ်ခြားခရီးတွေထွက်ရင်လည်းရင်းနှီးမှုပိုရှိလာစေမှာအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေခရီးကတော့ ခင်မင်ရသူတွေနဲ့ပိုပြီးနီးကပ်လာစေပါတယ်။တစ်ခြားခရီးစဉ်တွေဆို လျှောက်လည်ဖို့သွားရတာနဲ့တင် အချိန်ပိုကုန်တာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ စက်ဘီးပဲအတူစီးမလား၊ဘောလုံးပဲပစ်ဖမ်းဆော့မလား၊ရေပဲ အတူတူဆော့မလားသောင်ပြင်မှာပဲလှဲအိပ်မလား၊ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေလည်းအတူတူရိုက်မလား စသဖြင့် ရင်းနှီးမှုပိုစေတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပိုရှိပါတယ်။
အလာတုန်းက စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့လာပေမဲ့ အပြန်မှာတော့ စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ လူက အရမ်းကို Fresh ဖြစ်သလို ခံစားရစေမှာပါ။
မိသားစုတွေ၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းသံယောဇဉ်တိုးလာရလို့ စိတ်ချမ်းသာရသလို အိုင်ဒီယာကောင်းတွေလည်းရလာလို့ အပြန်ခရီးက
ပင်လယ်ကမ်းခြေသွားပြီးရင် ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ခဲ့ဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော်
ဒရာမာကားအသစ်မှာ Kim Hyang Gi တို့နဲ့အတူ မြင်တွေ့ရမယ့် Kang Ki Young